Mpanamboatra sy mpamatsy alika | China Dog Leash Factory
1.Ny raharaha Extra Bungee Retractable Dog Leash dia vita amin'ny fitaovana ABS + TPR avo lenta, hisorohana ny famakiana ny tranga noho ny fianjerana tsy nahy.
2.Ampianinay koa ny fametahana tadim-bolo fanampiny ho an'ny fametahana alika azo alaina. Ny famolavolana bungee tokana dia manampy amin'ny famoahana ny hatairan'ny hetsika haingana rehefa ampiasaina amin'ny alika mavitrika sy mavitrika. Rehefa miala tampoka ny alikanao dia tsy ho taitra tampoka ianao, fa ny vokan'ny bungee amin'ny kofehy elastika dia hampihena ny fiatraikany amin'ny sandrinao sy ny sorokao.
3.Ny ampahany manandanja indrindra amin'ny fehy azo averina dia ny lohataona. Extra Bungee Retractable Dog Leash miaraka amina hetsika lohataona matanjaka mba hisintona moramora, hatramin'ny 50 000 heny. Izy io dia mety amin'ny alika lehibe mahery, salantsalany ary karazany kely kokoa.
4.Extra Bungee Retractable Dog Leash koa dia manana 360° leash biby tsy misy tangle izay manome fahalalahana bebe kokoa ny biby fiompinao hifindra monina ary tsy ho voafehinao amin'ny firaka ianao.
Manampy anao hitazona fangejana mafy izany, na dia amin'ireo alika lehibe misarika sy mihazakazaka aza.
Ny lohataona mavesatra ao anaty amin'ity haavo alika azo esorina ity dia afaka miatrika mora foana ny alika mavitrika hatramin'ny 110 lbs.
Ny tadin'ny amboa ambongadiny dia vita amin'ny tady nylon nohatsaraina izay mahazaka alika na saka hatramin'ny 44lbs ny lanjany.
Ny tadin'alika ambongadiny azo ahodina dia mahatratra 3m eo ho eo, mahazaka hatramin'ny 110 lbs.
Ity fatorana amboa ambongadiny ity dia manana famolavolana fikirakirana ergonomika, ahafahany mandeha an-tongotra lavitra amin'ny fampiononana, ary tsy misy ahiahy ny handratra ny tananao. Ankoatr'izay, io'somary maivana sy tsy malama, noho izany dia tsy hahatsapa havizanana na mirehitra ianao rehefa mandeha lavitra be.
1.Ny fitaovana an'ny Rash azo avela ho an'ny alika kely dia tia eco, tsy misy poizina ary tsy misy fofona. Ny fehin-kibo dia manome androm-piainana lava ampiasaina, ary ny lohataona avo lenta dia mahatonga ny fehin-kibo hihoatra sy hialana tsara.
2.Dustable ABS casing dia manana fihazonana ergonomika sy anti-slip gun, tena ahazoana aina izy ary mifanaraka amin'ny felatananao, mametraka ny tananao toy ny fonon-tànana. Ny famolavolana anti-slip an'ny fehin-kibo azo ahemotra ho an'ny alika kely dia miantoka ny fiarovana, ary mitazona ny fifehezana zavatra foana ianao. 3.Paingam-pandrika vy miraikitra tsara amin'ny vozon'akanjon'ny biby fiompy.